Bilan oo ah barnaamij warbaahineed oo ay gabdho keliya maamulaan oo Muqdisho lagu daahfurey. – Radio Muqdisho
Waxaa maanta la daahfuraya qeybtii ugu horreysay oo warbaahineed oo ay ka hawlgalayaan gabdho saxafiyiin Soomaaliyeed, taasoo oo siineysa haweenka xirfadleyda ah ee ku takhasusay warbaahinta in ay iyagu go’aan ka gaaraan barnaamijyada ay tabinayaan iyagoo oo xor ka ah cabsi iyo dhibaateyn.
Qaybta waxaa ka shaqeeya oo maamula gebi ahaanba haween leh madax-bannaani tafatiran oo dhammaystiran waxayna soo saari doonaan sheekooyinka TV-ga, raadiyaha iyo warbaahinta internetka. Hal tafatire iyo shan saxafi ayaa go’aan ka gaari doona arrimaha ay tebinayaan iyo sida, iyaga oo isugu jira warar xiiso leh iyo maqaalo qotodheer oo diiradda lagu saarayo sheekooyinka u baahan in la tebiyo.
Qeybtan oo magaceeda la yiraahdo Bilan, waxaa maalgeliyay Hay’adda Qaramada Midoobay u qaabilsan Horumarinta ee UNDP, waxaana marti-gelin doona oo ay ku dhex-shaqeyn doona gudaha xafiisyada Dalsan Media Group ee Muqdisho, iyadoo barnaamijyada ay soo saarayaana lagu tabin doono warbaahinta Dalsan, sidoo kale waxay la hadli doonaan warbaahinta caalamiga.
“Muddo dheer, haweenka saxafiyiinta Soomaaliyeed waxaa loola dhaqmayaa sidii muwaadiniin heer labaad ah, waxaana la iska indhatiray wararka, sheekooyinka iyo codadka la xiriira arrimaha haweenka kuwaas oo ah kala bar shacabka; Hadda annaga ayaa mas’uul ka ah warqabadka iyo qaabka loo tebinayo sheekada,” ayay tiri Nasriin Maxamed Ibraahim, oo qabanaysa jagada Tafaftiraha Guud ee Bilan.
Wareysiyo ay qaaday UNDP lixdii bilood ee ugu dambeysay, haweenka saxafiyiinta ah ayaa sheegay in aan lagu dhibaateeyo waddooyinka kaliya ee xitaa lagu dhibaateeyo goobaha shaqada. Inta badan waa loo diidaa fursadaha tababarka iyo dalacsiinta, iyo marka haweeneydu ay gaarto jago sare, inta badan waa la iska indhatiraa in lala macaamilo iyadoo shaqaalaha ka hooseeyo mudnaanta la siiyo. Sidoo kale waxaa la iska indhatiraa tebinta wararka iyo barnaamijyada muhiimka ee saameynta leh ee la xiriira arrimaha haweenka, kuwaas oo ay ku jiraan daryeelka carruurta, xadgudubka-qoyska iyo matalaadda siyaasadeed ee loo siman yahay.
“Waxaan rajaynaynaa in tani ay wax badan ka beddesho saaxadda warbaahinta Soomaaliyeed, isla markaana u furto fursado cusub oo haweenka saxafiyiinta ah, ayna iftiimiso mowduucyo cusub oo la iska indho-tiray, gaar ahaan kuwa muhiimka u ah haweenka,” ayuu yiri Jocelyn Mason, oo ah madaxa UNDP ee Soomaaliya
UNDP waxa ay sidoo kale bixin doontaa tababar iyo hagitaan muddo dheer socon doona, iyada oo ay keeni doonta qaar ka mid ah dadka magaca weyn ku leh saxaafadda Soomaalida iyo kuwa caalamiga ah, sida weriyaasha BBC-da ee Lyse Doucet iyo Razia Iqbal iyo sidoo kale Lyndsey Hilsum oo la shaqeysa Channel 4 iyo weriyaha Aljazeera Mohammed Cadow. UNDP waxay fursad u siindoontaa wariyaasha in ay khibrad ka helaan haweenka saxafiyiinta ah ee ka shaqeeya wadamada la mid ah Soomaaliya si ay isu dhaafsadaan fikrado una bixiyaan taageero wadajir ah.
Si loo horumariyo jiilka soo socda ee haweenka saxafiyiinta ah ee Soomaaliyeed, qaybtan waxay fursad tababar oo lix bilood ah (internship) siin doontaa ardayda ugu wanaagsan ee saxaafadda ka barta laba jaamacadood oo ku yaalla Muqdisho.
Guddiga doorashooyinka Heer Federaal oo wada Shahaada siinta Xildhibaannada Baarlamaanka 11-aad ee Soomaaliya: